Fakafaka : mitaky rafitra tsara fototra | NewsMada
Fakafaka : mitaky rafitra tsara fototra
Toa tazan-davitra ihany ny atao raha faly hatrany hanome tsiny ny mpanakanto ny amin’ny antony tsy mampivelatra ny zavakanto sy ny kolontsaina malagasy. Rehefa tomorina akaiky mantsy, ezaka goavana ny ataon’izy ireo kanefa takona noho ny tsy fisian’ny rafitra tsara fototra sy mazava. Na manan-talenta tahaka ny inona aza ny mpanakanto, aiza moa izay mba sehatra ahafahany maneho izany ? Eto an-dRenivohitra, zara raha misy vitsivitsy, na tena tsy misy mihitsy aza ho an’ny zavakanto sasany, toy ny hiragasy, sarimihetsika, teatra, sns.
Toerana aiza no tena mbola ahitana ny fototry ny zavakanto sy kolontsaina malagasy ? Any ambanivohitra. Raha mbola miaina ao anatin’ny tsy fisian’ny rafitra mazava, tahaka izao, anefa ny kanto sy ny kolontsaina malagasy, tsy antenaina hisy vokatra tsara ho azo amin’izany mihitsy. Firy amin’ny mpanakanto avy any ambanivohitra, ohatra, no ho afaka haneho ny talentany eto an-dRenivohitra sy hatrany ampitan-dranomasina ? Raha misy sampandraharaha mitily ireo mpanakanto mbola mahatana ny fototra, ohatra, azo inoana fa tsy ho voarebirebin’ny an’ny hafa ny tanora malagasy ka ahafantatra tsara ny velatanana sy ny varibotry, ny asampinga, ny kalo, ny fanorona, ny marovany, sns.
Ny eto Madagasikara, sady tsy misy rafitra mazava miaro ny kolontsaina sy ny zavakanto malagasy no tsy misy rafitra hoenti-mampivelatra izany akory. Trangan-javatra manjary mampitombo ny asan’ny mpanakanto. Vokany, mitambesatra ao an-damosin’ny mpanakanto avokoa na ny tsy tokony ho anjara asany aza. Tsy mahagaga raha marefo ny zavakanto malagasy raha mitaha amin’ny an’ny hafa. Ny an’ny vahiny, tsy manao afa-tsy ny manatsara ny voka-kantony ny mpanakanto. Ny mpanakanto malagasy sady mpamorona zavakanto no mpanenjika piraty, mpitady lalana ivoahana, sns.
Vahaolana anisan’ny akaiky amin’ny fametrahana rafitra tsara fototra ho an’ny kolontsaina sy ny zavakanto malagasy ny fananana minisiteran’ny Kolontsaina sy ny zavakanto « matanjaka » amin’ny lafiny rehetra… Olona mahafantatra tsara ny olan’ny kolontsaina sy ny zavakanto malagasy ka manam-piniavana hamaha izany. Toy izany koa ny tetibola, mila ampy iasana, sns.